i-gvSIG 1.9 ne-2.0 ezinzile ngoJulayi noSepthemba - i-Geofumadas
i-gvSIG 1.9 ne-2.0 igxile ngoJulayi noSeptemba
Meyi, 2009 I-GvSIG, Innovations
Ngokusemthethweni, izici ezicacile zendawo kanye nezinsuku ezisungulwe ukukhululwa kwezinguqulo eziqinile ze-gvSIG zimenyezelwe. Impendulo yemibuzo emibili eyisisekelo ibaluleke kakhulu:
I-1. Kuzokhishwa nini i-gvSIG 1.9?
27 kaJulio we-2009
I-2. Futhi i-gvSIG 2.0 izophuma nini?
I-15 ka-September 2009
Sithemba ukuthi umzamo wokuthuthukiswa uhlose ukwenza ukukhanya kwesikhulumi kukhanya, ngisho noma ku-Java ngoba kubonakala sengathi le nguqulo izoba ngezinga elihle lokuncintisana nezicelo eziphathelene nezici. Uhlu lwentuthuko lushicilelwe, esasivele sithuthukile ezinye ngombono wokuqala we-1.9 alpha. Ngezansi kwezinto eziyisisekelo ezisusiwe kakade ngokusebenzisa uhlu lokusabalalisa namanye amaforamu:
- Ingqikithi yendiza.
- Umhleli we-Symbol.
- Legend of izimpawu iziqu.
- Umlando wezimpawu ezilinganiselwe.
- Ingqikithi yamanani ngesigaba.
- Izinga lokufanekisa.
- Ukufunda / ukubhala izinkondlo SLD.
- Isethi yegama lesisekelo.
- Izinhlelo ezimbili zokulinganisa ezahlukene zezimpawu namalebula (ephepheni / ezweni).
- Izinganekwane ezisuselwa kuzihlungi (Amazwi).
- Ukudala izichasiselo ezizimele.
- Ukulawulwa kwezingubo ezigqamile zezinhlamvu ezibhalwe phansi.
- Okubalulekile ekubekwe kwamalebula.
- Ukubonisa kwamalebula ngaphakathi kwezingqinamba ezahlukene.
- Ukujula kwamalebula.
- Izinketho ezahlukene zokubekwa kwelebula.
- Ukusekelwa kwenani elikhulu leyunithi yokulinganisa kwamalebula.
- Ukuchofoza idatha namaqembu
- Ukuthekelisa kwekhasi
- Londoloza ingxenye yombono we-raster
- Amatafula wombala nama-gradients
- Ukwelashwa kwamanani we-Nodata
- Iyacubungula nge-pixel (izihlungi)
- Ukwelashwa kombala
- Isizukulwane sama-pyramid
- Izithuthukisi ze-Radiometric
- Ukulahlwa kabusha kwe-Raster
- Vectorization okuzenzakalelayo
- I-Band algebra
- Incazelo yezindawo ezithakazelisayo.
- Isigaba esinqunyiwe
- Ukuhlukaniswa okungahlelekile
- Izihlahla zezinqumo
- Ukuhlanganiswa kwezithombe
- Dweba imidwebo
- Amaphrofayela wesithombe
- Izilimi ezintsha: isiRashiya, isiGreki, iSwahili neSerbia.
- Isandiso sokuphathwa kokuhlanganiswa kokuhumusha.
- Izinhlamvu ezintsha.
- Sika i-polygon.
- Umsizi omusha wokujoyina amatafula.
- Engeza igridi ekubukeni ngaphakathi kohlelo.
- I-Wizard Yokubuyisela izendlalelo eziye zashintsha indlela (SHP kuphela).
- Usizo lwe-inthanethi
- Possibility for the user ukufihla ibha yamathuluzi.
- Izithonjana ezintsha
- Ukuhlanganiswa kokuphathwa kwe-CRS JCRS v.2.
- Ukuthuthukiswa kokufunda ifomethi ye-DWG 2004
- Ukuthuthukiswa kokusebenza kanye nezinsiza ze-hyperlink.
- Khumbula umzila lapho izinkondlo zokufanisa khona zikhona.
- Faka i-GeoServeisPort ku-nomenclator.
- Izinyathelo zamabanga azimele zendawo.
- Faka izindawo ngokuchofoza kabili.
Ngokuthakazelisayo, kulezi zixhobo zenguqulo zifakwe kwisandiso esasetshenziswa eMnyango Wezemvelo weJunta de Castilla de León okungenani unayo:
- Ukukhethwa yi-polyline.
- Ukukhethwa ngombuthano.
- Ukukhethwa ngendawo yethonya (buffer).
- Khetha konke.
- Ithuluzi lwazi olusheshayo (lapho igundane lisa namanje kwi geometry, a Ithuluzi lesithuluzi noma ibhulogi yokukhuluma ngolwazi lwamazwi athi geometry).
- Ithuluzi lokubonisa multicoordinated (Ivumela ukubonisa izixhumanisi zombono ngesikhathi esifanayo ngezixhumanisi zendawo kanye ne-UTM, ngisho nasendlini ehlukile ephuma kulowo okhethiwe ukubuka).
- I-Hyperlink ethuthukile, eyenzelwe ukufaka esikhundleni se-hyperlink yamanje futhi evumela ukuthi:
- Hlanganisa izinyathelo ezihlukene kwisendlalelo esifanayo.
- Hlanganisa ngokuqondile izenzo eziningana ngaphakathi kwombono (lokhu akusebenzanga kahle kwi-hyperlink "ye-classic"); Ngokuzenzakalelayo kufaka izinyathelo ezilandelayo: bonisa isithombe, layisha ungqimba we-raster ekubukeni, layisha uhlaka lwe-vector ngombono, ubonise i-PDF, umbhalo wokubonisa noma i-HTML.
- Engeza izenzo ezintsha ze-hyperlink ngokusebenzisa ama-plugin.
IZICWANGCISO ZOKUSEBENZA DATA
- Ukuthekelisa kwama-subsets amatafula kumafomethi e-DBF ne-Excel.
- Engeza ulwazi lomhlaba kwendlalelo (engeza amasimu "Indawo", "I-Perimeter", njll. etafuleni ngokuchofoza okumbalwa).
- Ngenisa amasimu (ukungenisa amasimu kusuka etafuleni elilodwa ukuya kwelinye, unomphela).
- Shintsha amaphuzu emigqeni noma amapolgoni, nemigqa kuma-polygons, ngokuhlanganyela.
- Phrinta ukubuka, usebenzisa ithempulethi.
- Ukukhethwa kwe-oda lokulayishwa kwezendlalelo (kuvumela ukucacisa ukuthi ngokuzenzakalelayo izimo zilayishwa ngaphezulu kwe-raster, isibonelo).
- Isipele ngokuzenzakalelayo se-.GVP uma ulondoloza iphrojekthi.
DWG I-GvSIG OS shp
Thumela Previous«Langaphambilini Model ukukala izinga Khulula Thwebula uhlelokusebenza
Post Next Amathuluzi wezindawo azishintshwa ku-Bentley MapOlandelayo "
Izimpendulo ze-2 ku "gvSIG 1.9 ne-2.0 ezinzile ngoJulayi noSeptemba"
NgoMashi, i-2010 ku
NgoMashi, cishe ngo-Ephreli, futhi okwamanje akuyona gvSIG 2.0
NgoFebhuwari, i-2010 ku
NgoFebhuwari, kanti namanje ayikho i-gvSIG 2.0 ... i-64 bits ... Fuck!